संयुक्त राज्य अमेरिका मा भ्रमण गर्न उत्तम ठाउँ - ALinks
संयुक्त राज्य अमेरिका पर्यटन को लागी एक धेरै लोकप्रिय गन्तव्य हो। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वका केहि सुन्दर पर्यटन स्थलहरूको गन्तव्य हो। यहाँ हामीले संयुक्त राज्य अमेरिकामा केही उत्तम पर्यटक आकर्षण स्थानहरू भेट्टायौं। अमेरिकामा धेरै प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण स्थानहरू छन् जुन हामी अन्वेषण गर्न सक्छौं।
२०२१ को सर्वश्रेष्ठ यात्रा बीमा कम्पनीहरू
सबैलाई अझै पनि नवीनतम स्वास्थ्य र सुरक्षा विकासहरू बारे यो जानकारी फेला पार्न मद्दत चाहिन्छ। यसैलाई ध्यानमा राखेर, पैसा यात्रा बीमा विश्लेषण र चिकित्सा कभरेज संग यात्रुहरूलाई मद्दत गर्न एक गहिरो गाइड सिर्जना। यहाँ सुरक्षित यात्राको लागि उत्तम गाइड हो।
१. माउन्ट रश्मोर राष्ट्रिय स्मारक
लोकप्रिय ठूलो मूर्तिकला माउन्ट रश्मोर राष्ट्रिय स्मारक माउन्ट रश्मोरमा निर्माण गरिएको। दक्षिण डकोटाको कालो पहाड श्रृंखलामा अवस्थित। १ 1941 60१ मा मूर्तिकला पूरा भयो र यसको hight को लागी अधिक लोकप्रियता प्राप्त भयो जुन -०-फिट अग्लो छ। ग्रेनाइटले प्रसिद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको अनुहार प्रतिनिधित्व गर्दछ। थिओडोर रुजवेल्ट, थॉमस जेफरसन, र जर्ज वाशिंगटन। कलाकारहरू: गुट्जोन बोर्गलम, लिंकन बोर्गलम.
माउन्ट रश्मोर राष्ट्रिय स्मारक
ठेगाना-: १13000००० एसडी -२244, कीस्टोन, एसडी 57751 XNUMX१, संयुक्त राज्य अमेरिका
भ्रमण गर्दै समय:5मा 11 बजे
२.सिएटलमा पाइक प्लेस मार्केट
सिएटलको पाइक प्लेस मार्केट १ 1907 ०। मा खुल्यो। बजार वाशि Washington्टनको सिएटलमा इलियट बेको वाटरफ्रन्टको सामना गर्दै छ। पाइक प्लेस मार्केट यस क्षेत्रमा सब भन्दा पुरानो बजार स्थापना हो।
ठेगाना: सिएटल, P 85 पाइक सेन्ट, डब्ल्यूए 98101 XNUMX १००१, अमेरिका
भ्रमण गर्ने समय:9मा6बजे
लस एन्जलस मा भेनिस बीच
तपाइँ भेनिस बीच भ्रमण गर्न मिस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँको संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण भेनिस बिचको भ्रमण बिना अपूर्ण हुनेछ। यो हड्ताल र रोमाञ्चकारी तटहरू मध्ये एक हो। भेनिस बीच एक बोर्डवाक छ। सडक कलाकारहरूले समुद्र तट कम्मर कसेका छन, नाच गर्छन् र यात्रीहरूका लागि गाउँछन्।
ठेगाना: पश्चिमी शहरी क्षेत्र लस एन्जलस देश
भ्रमण गर्ने समय: १० देखि बिहान6बजेसम्म
Great. ग्रेट स्मोकी पर्वत राष्ट्रिय निकुञ्ज
टेनेसी र उत्तर क्यारोलाइनाको सिमाना बीच स्थित ग्रेट स्मोकी पर्वतहरू। यो पार्क देश भर दर्शकहरु द्वारा मनपरायो। यो आगन्तुकहरु को लागी एक अद्भुत ठाउँ हो जो पैदल यात्रा को मन पर्छ तिनीहरू सुन्दर पुरानो-विकास वनहरूमा हाईक गर्न सक्छन्। विभिन्न चराहरू, जनावरहरूको सयौं प्रजातिहरू स्पट गर्नुहोस् र दुई आगन्तुक केन्द्रहरू जाँच गर्नुहोस्।
धुम्रपान गर्ने पहाडहरू
ठेगाना: संयुक्त राज्य अमेरिका
स्थापना गरियो: 15 जुन 1934
Or. ओर्ल्यान्डोमा वाल्ट डिस्ने वर्ल्ड
फ्लोरिडामा ओर्लान्डो मनोरञ्जन पार्कहरूको लागि परिचित छ। वाल्ट डिस्ने वर्ल्ड विभिन्न थिमको आधारमा सुन्दर पार्कहरू मिलेर बनेको थियो। र मैजिक किंगडम, हलिउड स्टूडियो, एनिमल किंगडम र वाटर पार्क सहित। यस बाहेक, आगन्तुकहरूले अद्भुत सवारीको आनन्द लिन सक्नेछन्। र रात्रि जीवन, किनमेल, र डिज्नी स्प्रि .हरू पत्ता लगाउन पनि मौका पाउनुहोस्। यो संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबै भन्दा राम्रो पर्यटक आकर्षण स्थानहरु को बारे मा हो।
वाल्ट डिस्ने वर्ल्ड
दर्जा: 4.7 स्थान: वाल्ट डिस्ने वर्ल्ड रिजोर्ट, ओर्लान्डो, अमेरिका स्थापना गरियो: 1965
उत्तरी एरिजोनामा अवस्थित ग्राण्ड क्यान्यनलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको एउटा ठूलो पर्यटक आकर्षण मानिन्छ। यो कोलोराडो नदी द्वारा धेरै मिलियन वर्ष मा नक्काशी गरिएको थियो। यसको विशाल मापन र जटिल रंगीन परिदृश्यले आगंतुकहरूलाई विस्मय-प्रेरणादायक भिस्टा प्रदान गर्दछ जुन विश्वभरिमा अन्य जस्तो छैन।
ग्रान्ड क्यान्यन, एरिजोना
येलोस्टोन नेश्नल पार्क, वायोमिंग
यलोस्टोन नेश्नल पार्क विश्वको पहिलो राष्ट्रिय पार्क थियो। यो १ 1872२ मा गीजर, तातो स्प्रि ,हरू, र अन्य थर्मल क्षेत्रहरूको विशाल संख्याको संरक्षणका साथै क्षेत्रको अविश्वसनीय वन्यजीवन र असह्य सुन्दरता बचाउनको लागि स्थापना गरिएको हो। यलोस्टोन विशाल हटस्पटको शीर्षमा बस्दछ जहाँ प्रकाश, तातो, पग्लिएको आवरण ढु rock्गा सतह तिर उगन्छ। यो प्रकृतिको अद्भुत आश्चर्य हो।
योसेमाइट नेशनल पार्क, मध्य क्यालिफोर्निया
क्यालिफोर्नियाको सियरा नेवादा माउन्टेन्समा अवस्थित योसेमाइट नेश्नल पार्क एउटा असाधारण गन्तव्य हो जुन विश्वभरि यसको आश्चर्यजनक दृश्यहरूका लागि परिचित छ। आगन्तुकहरूले नेत्रहीन ग्रेनाइट चट्टानहरूको पियर हेर्न सक्छन्, स्पष्ट झरनाहरूको प्रशंसा गर्न सक्छन् र सयौं वर्ष पुरानो सेक्विया ट्रेस हेर्नुहोस्।
उत्तम ठाउँहरू भ्रमण गर्नपर्यटक
१००० भन्दा कम अध्ययन लम्पहरू
संयुक्त राज्य अमेरिका को सर्वश्रेष्ठ बैंकहरू
जोशुआ ट्री राष्ट्रिय निकुञ्ज
के तपाई संयुक्त राज्यमा पढ्न चाहानुहुन्छ? यहाँ स्क्रोल गर्नुहोस् !!
कसरी संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबै भन्दा राम्रो काम खोज्ने?
अस्ट्रेलिया जस्तो केही छैन ', अष्ट्रेलियाको केहि राम्रा ठाउँहरू पत्ता लगाउनुहोस्